Madasha Qaranka oo dib u dhigtay 18-kii Kursi ee ay aqalka sare kudareen. | ogaden24
Madasha Qaranka oo dib u dhigtay 18-kii Kursi ee ay aqalka sare kudareen.
Dec 29, 2016 - Aragtiyood
War-murtiyed kasoo baxay Golaha wada-tashiga madasha Qaran ayay ku Gar-waaqsadeen inay sharcidaro ahayd 18-kii xubnood ee ay si iskood ah ugu Kordhiyeen Aqalka sare ee Barlamaanka Soomaaliya, waxayna madashu sheegtay in Go’aanka ay dib ugu celinayaan Barlamaanka ladhaariyay.
Madasha ayaa war-murtiyeedkeeda waxay Hambalyo ugu direen Baarlamaanka cusub oo ay ka dalbadeen inay wax kabadalaan Dastuurka si 18-Kursi ee aqalka sare lagu Kordhiyay sharci u noqdaan waana kana war-murtiyeedka madashu soo saartay oo ka Kooban 3-Qodob e, ka bogasho wanaagsan.
1. MHQ waxay hambalyo u direysa Xildhibaanada Baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya oo uu u qabsoomay Munaasabadda kulanka Kafadhigooda koowaad oo uu rasmi ahaan ku dhismay Aqalka Sare isla markaana xubnaha labada Aqal ee Baarlamaankana lagu dhaariyey.
Waa markii ugu horreysay ee muddo 47 sano ka dib, baarlamaan muddada xilhayntiisi si buuxda usoo dhamaysta oo xilkii Golaha sharcidejinta Qaranka Cusub si dimuqraaddinimo iyo maamuus ku dheehan xilka ugu wareejiyey Baarlamaanka cusub.